Degdegga ah oo aan dib loo tafatirin: Waaxda Arrimaha Dibedda ee Maraykanka ee Khatarta Ruushka ee Ukraine & Weerarka Imaaraadka
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Wararka Dowladda » Degdegga ah oo aan dib loo tafatirin: Waaxda Arrimaha Dibedda ee Maraykanka ee Khatarta Ruushka ee Ukraine & Weerarka Imaaraadka
114 min akhris
Sababtoo ah dabeecadda halista ah ee suurtagalka ah weerarka Ruushka ee Ukraine, eTurboNews waxay bixinaysaa qoraal cayriin ah oo ah shirkii jaraa'id ee dhawaan la soo gabagabeeyay ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka
Warbixin kooban oo Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka, Isniin 24 Janaayo 2022,
Nooca ceeriin aan la tafatirin
Ned Price, Afhayeenka Waaxda
Qiimaha MR: Galab wanaagsan. Isniin Farxad leh. Wacan in la arko qof walba. Kaliya hal shay ayaa xaga sare ah ka dibna waxaan ku qaadan doonaa su'aalahaaga.
Dowladda Mareykanka ayaa cambaareysay weerarkii habeen hore ay Xuutiyiinta ku qaadeen dalalka Imaaraadka iyo Sacuudiga, kaasi oo dad rayid ah ay ku waxyeeloobeen gudaha Sacuudiga, waxaana weerarkan uu daba socdaa duulaan lamid ah kii Xuutiyiinta ay todobaadkii hore ku dileen saddex qof oo rayid ah magaalada Abu Dhabi. Waxaan xaqiijineynaa sida ay nooga go'an tahay in aan gacan ka geysanno xoojinta difaaca saaxiibada Sacuudiga iyo Imaaraatka.
Weeraradan ka dhanka ah Imaaraatka Carabta iyo Sacuudiga iyo waliba duqeymo dhanka cirka ah oo dhawaan ka dhacay dalka Yemen oo ay ku dhinteen dad rayid ah ayaa waxa ay ka dhigan yihiin xaalad murugo leh oo sii kordhineysa dhibaatada ay ku hayaan shacabka Yemen.
Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada isku haya colaadda inay go'aansadaan xabbad-joojin, oo ay u hoggaansamaan waajibaadka ka saaran sharciga caalamiga ah ee bani'aadamnimada, oo ay ku jiraan kuwa la xiriira ilaalinta dhammaan dadka rayidka ah, oo ay si buuxda uga qaybgalaan geeddi-socod nabadeed oo Qaramada Midoobay ay hoggaamiso.
Dadka Yemen waxay si degdeg ah ugu baahan yihiin in xal diblumaasiyadeed laga gaaro colaadda, xal diblumaasiyadeed oo noloshooda wanaajiya una ogolaanaya inay si wadajir ah u go'aansadaan mustaqbalkooda.
Taas, waan ku faraxsanahay inaan u weecdo su'aalahaaga. Haa? Hagaag, halkaas ayaan dib ugu bilaabi doonaa, sidii aan ballan qaaday. Fadlan.
Su'aal: (Lama maqli karo) arrintan, sidaas darteed -
Qiimaha MR: Hagaag Wayn
Su'aal: Ii dulqaado, fadlan. Weerarka ay Xuutiyiinta maanta ku qaadeen Imaaraadka ayaa ah kii saddex iyo tobnaad ee 10-kii maalmood ee u dambeeyay. Haddaba weerarradan waa la sii dardargeliyay waayadan dambe. Miyaynu hadda aragnaa dardargelinta la midka ah ee habka tixgelinta ee Biden - ee maamulka si loo qoro Xuutiyiinta weerarka argagixisada?
Qiimaha MR: To – waan ka xumahay, I —
Su'aal: Si aad dib ugu qorto weerarka argagixisada?
Qiimaha MR: Oh, si aan u taxno iyaga.
Su'aal: Markaa dardargelintan waxay ka dhalan doontaa isla dardargelinta habraaca tixgelinta ee uu daryeelay maamulka Biden ee ku saabsan dib ugu celinta weerarradii argagixisanimo?
Qiimaha MR: Haddaba su'aashaadu waxay ku saabsan tahay xaaladda Xuutiyiinta iyo in dib loo habeyn karo. Waa hagaag, sida aad la socotaan, Madaxweynuhu waxa uu todobaadkii hore la hadlay mar uu qaranka kula hadlay shirkiisa jaraa’id Arbacadii hore. Waxa uu sheegay in su’aasha ah dib u habeynta, dib u habeynta Ansarallah, oo ah magaca dhaqdhaqaaqa Xuuthiyiinta, la tixgelinayo. Markaa anigu awood uma lihi inaan ka hadlo tillaabo kasta oo suurtagal ah oo laga yaabo in la tixgeliyo.
Waa kan waxa aan dhihi doono, in kastoo. Waxaan sii wadi doonaa inaan la shaqeyno saaxiibadayada gobolka, oo ay ku jiraan Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka, si aan uga caawinno inay iska difaacaan weerarradan xun ee Xuutiyiinta. Sida xogtii ugu dambaysay ee aan arkay, iyada oo kaashanaysa Maraykanka, Boqortooyada Sucuudi Carabiya waxay awood u yeelatay inay ka hortagto boqolkiiba 90 weerarradan ka imanaya Yemen, ee ka imanaya Xuutiyiinta. Dabcan, yoolkeena, yoolkeena wadajirka ah, ayaa doona inaan helno - si aan u helno inay taasi noqoto 100 boqolkiiba. Laakiin weli waan joognaa - waan sii wadi doonnaa in aan garab istaagno asxaabteena arrintan.
Waxaan sidoo kale, oo aan sii wadnay inaan kula xisaabtano hoggaamiyeyaasha Xuutiyiinta dhaqankan canaanta ah. Waxaan soo saarnay cunaqabatayn hoggaamiyeyaasha muhiimka ah iyo magacaabista hoggaamiyeyaasha muhiimka ah bilihii la soo dhaafay. Waxaan sii wadi doonnaa inaan ugu yeerno dhammaan agabka ku habboon agabkeenna si aan ula xisaabtano Xuutiyiinta, hoggaamiyeyaasha Xuutiyiinta ee mas'uulka ka ah weerarradan. Kama daalin doono magacaabista hoggaamiyeyaasha Xuutiyiinta iyo hay'adaha ku lugta leh weerarrada millatari ee khatarta ku ah rayidka iyo xasilloonida gobolka, sii wadida colaadda, ku xadgudubka xuquuqda aadanaha, ama ku xad-gudbida sharciga caalamiga ah ee bini'aadantinimada, ama uga sii daraya dhibaatada bini'aadantinimo ee ba'an - sida laga soo xigtay xisaabaadka intooda badan. , waa dhibaatada bini'aadantinimo ee ugu qoto dheer ee ka dhacda wejiga aduunka.
Laakiin tani waa tixgalin adag, waxaana tixgelintan ka hadalnay maalmihii ugu horreeyay ee maamulka, qiyaastii sannad ka hor hadda, markii aan ka hadalnay go'aanka bilowga ah ee ku wajahan xuutiyiinta sababtoo ah go'aankaas iyo imaatinka go'aankaas asalka ah, waxaanu dhagaysanay dhowr qof oo ay khusayso. Waxaan maqalnay digniin ka timid QM. Waxaan dhageysanay cabashooyinka kooxaha samafalka. Waxaan dhegaysanay xubnaha laba geesoodka ah ee Congress-ka kuwaas oo ka soo horjeeday go'aankii maamulkii ugu dambeeyay ee lagu magacaabay Xuutiyiinta urur argagixiso shisheeye ah, ka dibna STDT sababtoo ah ugu horreyn, go'aaminta buste waxay si macquul ah u saameyn kartaa awooddayada wax-qabadka iyo bixinta baahida aadka loo baahan yahay. gargaarka bini'aadantinimo ee muwaadiniinta Yemen.
Waxa kale oo ay saamayn kartaa helitaanka badeecadaha aasaasiga ah sida cuntada iyo shidaalka. Markaa waxaan maqalnay walaacyadaas si qaylo ah oo cad, waxaanan ognahay in ku dhawaad ​​90 boqolkiiba badeecooyinka muhiimka ah ee Yemen ay soo dejiyaan ganacsiyo gaar ah. Digniin badan awgeed, alaab-qeybiyeyaasha kuwan - alaab-qeybiyeyaashan iyo hay'adaha maaliyadeed waxay joojin karaan hawshaas, taas oo muhiim u ah baahiyaha bani'aadamnimada ee dadka Yemen.
Markaa waxaan maqalnay walaacyadaas cod dheer oo cad. Waxaan si dhow u eegaynaa jawaabta ku habboon, laakiin waxa aan sii wadi doono, oo aan su’aal ka taagnayn, waa in aan garab istaagno Imaaraadka, oo aan garab istaagno Sucuudiga, lana xisaabtano hoggaamiyeyaasha Xuutiyiinta ee mas’uulka ka ah weerarradan argagixiso.
Su'aal: Haa, Ned, kaliya daba-socod, laba qodob oo kale oo arrintan ku saabsan: Maraykanku wuxuu sidoo kale ku sheegay bayaanno hore - Wasaaradda Arrimaha Dibadda waxaan aaminsanahay, iyo Aqalka Cad - inay ka taageeri doonaan Imaaraadka inay difaacdaan dhulalkooda. Haddaba sidee bay taageeradani u furmi doontaa si dhab ah? Taasi waa mid. Labo, Maraykanku ma ka caawin doonaa mamnuucidda qulqulka hubka iyo taageerada dhaqaale ee Xuutiyiinta, iyadoo la eegayo xaqiiqda ah in ay taageeraan oo ay taageeraan Iran?
Qiimaha MR: Haddaba su'aashaada ugu horreysa, waxaan si weyn ula shaqeyneynaa saaxiibadayada Imaaraatka, si la mid ah kuwa aan la shaqeyno Sacuudiga, si aan u siino waxay u baahan yihiin si ay isaga difaacaan weerarada noocaan ah. Waan sii wadi doonaa taas. Waxaan sii wadi doonaa inaan ula shaqeyno siyaabo kala duwan si aan uga caawino inay iska difaacaan weerarradan.
Iyo su'aashaada labaad ee ku saabsan -
Su'aal: Haa. Maraykanku ma ka caawin doonaa mamnuucida qulqulka hubka iyo taageerada dhaqaale ee Xuutiyiinta, iyadoo la eegayo xaqiiqda ah inay taageerto Iran?
Qiimaha MR: Dhab ahaantii. Taasna aad baan uga shaqaynay, ma aha maamulkan oo keliya ee waanu ka shaqaynaynay maamulladii kala dambeeyey. Waxaad maqasheen saaxiibadayada Wasaaradda Difaaca oo ka hadlaya qabashada badda, tusaale ahaan, hub loo waday Yemen iyo Xuutiyiinta. Waxaad aragteen anagoo tooshka ku ifinayna heerka taageerada Iran iyo kooxaha ay Iran taageerto ay siiyaan Xuutiyiinta. Waad maqasheen anagoo ka hadlayna doorka khalkhal gelinta ah ee Iran iyo xulafadeeda ay ka wadaan gobolka oo dhan, waxaana hubaal ah in Yemen ay ku jirto, waxaana hubaal ah in ay ku jirto taageerada Iran ay siiso dhaqdhaqaaqa Xuutiyiinta Yemen.
Su'aal: Su'aashu waxay tahay: Ma joojinaysaa qulqulka hubka jidh ahaan? Waxaan ula jeedaa, ma waxaad u socotaa (aan la maqli karin) xoogga hubka? Waxaan ula jeedaa, waxaan filayaa inay taasi tahay gundhigga su'aasha.
Qiimaha MR: Hagaag, oo jawaabtayda taasi waxay ahayd haa, waxaanu sii wadi doonaa inaanu samayno wax kasta oo aan awoodno si aan u joojino socodka hubka, gargaarka, ee -
Su'aal: Markaa waxay u badan tahay inaynu aragno, sida, duqeymaha cirka ee Maraykanka si loo joojiyo socodka hubka?
Qiimaha MR: Waan ka xumahay?
Su'aal: Waxay u badan tahay inaan aragno weeraro la doonayo in lagu joojiyo qulqulka hubka ee ciidamada Mareykanka?
Qiimaha MR: Waxaad aragteen talaabooyin isdaba joog ah oo ay wadaan maamulkan iyo maamuladii ka horeeyay ee lagu joojinayo qulqulka hubka, laguna joojinayo qulqulka saadka Xuutiyiinta, waxaana hubaal ah in taasi ay ku jirto wixii Iran ay bixisay.
Su'aal: Ned, ee Russia. Markaa waxaa jiri doona -
Su'aal: - wacitaanka reer Yurub ee ku saabsan (aan la maqli karin) -
Qiimaha MR: Waa hagaag, waan ka xumahay, aynu xidhno - aynu xidhno Yemen, ka dibna waxaan iman doonaa Ruushka.
Su'aal: Xuuthiyiinta ayaa sheegtay in shalay ay la beegsadeen saldhiga ciidamada cirka Mareykanka ee Imaaraatka Carabta, waxaana ciidamada Mareykanka ay sheegeen in ay rideen ciidamada Patriots oo ka hortagay gantaaladooda. Ma jiri doontaa falcelin Mareykan ah oo ka dhan ah Xuutiyiinta, gaar ahaan in ay beegsadaan ciidamada Mareykanka ee ku sugan Imaaraadka?
Qiimaha MR: Waan sii wadi doonaa inaan Xuutiyiinta kula xisaabtano weerarradan argagixisanimo. Siyaalo kala duwan ayaan taas u samayn doonaa. Waxaan horey u isticmaalnay tiro qalab ah, waxaanan ka shakisanahay inaad arki doontid inaan sii wadno hawshaas maalmaha iyo toddobaadyada soo socda.
Su'aal: Mid kale oo Yemen ah.
Qiimaha MR: Hubaal.
Su'aal: Maraykanku ma gaadhay natiijo ka duwan waxa ay saamayn ku yeelan doonto bixinta gargaarku marka loo eego magacaabista? Oo haddaysan ahayn, maxaad u maaweelinaysaa fikradda?
Qiimaha MR: Hagaag, waxaanu la shaqaynaynaa qaar ka mid ah isla daneeyayaasha aan hore u soo sheegay si ay u sii wadaan maqalka fikradahooda, si ay u helaan aragtidooda. Hubaal qaar ka mid ah walaacyada aan maqalnay sannad ka hor ayaa wali socon doona. Su'aashu waxay tahay haddii aan awoodno - haddii dib-u-beddelku noqon lahaa - waxay noqon lahayd mid dan u ah Maraykanka, waxay noqon lahayd mid amnigeena ah, waxay noqon lahayd danaha amniga ee asxaabtayada gobolka, iyo inay noqon lahayd danta Waxaan u aragnaa soo afjaridda colaadda iyo xaaladda degdegga ah ee bini'aadantinimo ee Yemen.
Markaa waxa ay ahayd arrin adag – waa qodobbo adag oo aynu miisaameyno, laakiin sida uu Madaxweynuhu sheegay waanu ka fiirsanaynaa – waanu ka fiirsanaynaa go’aanka.
Maxaa kale oo ku saabsan Yemen? Xumeyra.
Su'aal: Hagaag Laba qaado. Dhanka Ruushka, sidaas darteed waxaa jiri doona wicitaan lala yeelanayo reer Yurub galabta madaxweyne Biden. Waxaan la yaabay - tan waxaa lagu waydiiyay warbixin kooban oo Aqalka Cad ah sidoo kale, laakiin haddii aad wax yar iftiimin karto waxa uu maamulku rajeynayo inuu ku gaaro wicitaankan. Waxaan maqalnay Madaxweyne Biden usbuucii hore si cad u qiraya dildilaaca ka dhex jira Isbaheysiga NATO iyo sidoo kale reer Yurub sida saxda ah ee looga jawaabo. Ma jiraan wax horumar ah tan iyo markaas reer Yurub? Ma ku dhowdahay inaad isla bogag joogto? Oo ma jirtaa sabab aan ku fileyno in wicitaankan ka dib aad noqon doonto nooc ka badan isla bogga ku saabsan sida looga jawaabo gelitaanka yar yar, ama duulaanka weyn, wax kasta oo ay noqon karto?
Qiimaha MR: Hagaag Xumeyra, sidaad ogtahay, waxaan joognay Yurub todobaadkii hore. Waxaan joognay Kyiv. Ka dib waxaan tagnay Berlin, halkaas oo ay u dheer tahay la kulanka xulafada Jarmalka Xoghayuhu wuxuu fursad u helay inuu la kulmo waxa loogu yeero Quad Yurub. Intaa ka hor, waxaan joognay Yurub bishii hore halkaas oo aan fursad u helnay inaan la kulanno xulafadayada NATO, OSCE. Toddobaadyadii dhexda u ahaa, Xoghayaha, Ku-Xigeenka Xoghaye, Ku-Xigeenka Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Arrimaha Siyaasadda, oo aan ka hadal Madaxweynaha iyo La-taliyaha Amniga Qaranka iyo qaar kale oo badan ayaa si joogto ah telefoon kula xiriiray xulafada iyo asxaabta si ay uga wada hadlaan gardarrada Ruushka iyo jawaab.
Oo waxaan rabaa inaan ka hadlo mawduuca su'aashaada sababtoo ah dhammaan hawlgelintaas - ka-qaybgalka shakhsi ahaaneed, wada-sheekeysiga, shirarka fiidiyowga - mid kasta oo ka mid ah hawlgelintaas, waan maqalnay, adiguna waad maqashay. Annaga oo keliya ma aha, laakiin xulafadayada Yurub iyo shuraakadayada, xulafada gaarka ah, NATO, OSCE, G7, Midowga Yurub, Golaha Yurub - waxaad maqashay fariin isku mid ah: Haddii ciidan kasta oo Ruushku u dhaqaaqo xadka, taasi waa dib u cusboonaysiin. duullaan; waxaa lagala kulmi doonaa jawaab degdeg ah, daran, oo midaysan oo dhanka Maraykanka ah iyo dhanka xulafadayada.
Markaa ma jiro wax mugdi ah oo arrintaas ku saabsan. Ma jiro mugdi. Maalin ma jiro. Waan ognahay taas. Iyo muhiimad, Federaalka Ruushku wuu ogyahay taas.
Su'aal: Sax. Markaa - waayahay, mahadsanid. Waxaa jira xoogaa iftiin maalmeed ah, laakiin ma doonayo inaan taas ku maaweeliyo muddo aad u dheer. Waxaan ahaa - waxaan la yaabanahay, ma ku iftiimin kartaa wax yar oo ku saabsan waxa aad rabta inaad ku guulaysato kulankan gaarka ah? Kadibna waxaan aadayaa warqad aan ahayn.
Qiimaha MR: Hagaag, aan u soo noqdo hadalkaagii qalafsanaa - oo laga yaaba in la rabay uun in aan noqdo hadal aan leexleexad lahayn, laakiin waan iska celin kari waayay.
Su'aal: Maya, waa taas, waxaan ula jeedaa, Madaxweynuhu wuxuu yidhi waa lagu kala aragti duwan yahay, taasina waxay ahayd wax inagu soo jiray. Waxaan aragnay waxa -
Qiimaha MR: Waxaad ka maqasheen Madaxweynaha, waxaad ka maqasheen Xoghayaha, waxaad ka maqasheen La-taliyaha Amniga Qaranka, waxaad ka maqasheen dadka kale, haddii ay dhacdo gardarada Ruushku ku hayo Ukraine, jawaab ayaa laga heli doonaa. Way degdegi doontaa; waxay noqon doontaa mid daran. Haddii ay dhacdo in la soo duulo, waxay noqon doontaa mid aan horay loo arag marka la eego tillaabooyinka aan diyaar u nahay inaan qaadno.
Waxaadna dhihi kartaa waxaa jira dharaar, laakiin waxaan rajeynayaa inaad sidoo kale u fiirsato oo aad dhegaysato weedhaha ka soo baxay caasimadaha Yurub, weedhaha ka soo baxay NATO, OSCE, G7, komishanka Yurub. oo ka yimid Maraykanka, xulafadayada oo garab taagan Xoghaye Blinken, haddii ay taasi ahayd Wasiirka Arrimaha Dibadda Baerbock, hadday tahay xulafada kale iyo asxaabta kale ee aan la kulannay toddobaadyadii la soo dhaafay iyo labadii bilood ee la soo dhaafay.
Markaa qofku wuxuu sheegan karaa inuu jiro iftiin dharaar ah; laakiin hubaal, haddii aad u fiirsato mugga iyo walxaha sida weyn ugu dhex jira diiwaanka dadweynaha, waxaan filayaa inay taasi beeninayso sheegashadaas.
Su'aal: Nimanyahow ma waxaad soo diri doontaan warqadan aan ahayn, sida, usbuucan? Ma ka hadli kartaa wax yar oo ku saabsan farsamada taas, maxay ku kordhin kartaa?
Qiimaha MR: Markaa sida uu Xoghayuhu sheegay Jimcihii, waxaanu filaynaa inaanu awood u yeelano inaanu jawaab qoraal ah u dirno toddobaadkan. Kahor intaanan taas samayn, iyo waxa aan hadda qabaneyno - tani waxay ku imaaneysaa su'aashaadii hore ee ku saabsan la-shaqeynta xulafadayada Yurub iyo la-hawlgalayaasha - waxa aan sameynaynay, sida aad ogtahay iyo sida aad aragteen, waa isku-dubarid joogto ah iyo wada tashi aan la yeelano xulafadayada iyo la-hawlgalayaashayada dhinaca kale ee Atlantic.
Waxaan tan ku samaynaynay marka la eego jawaabta aan horay loo arag, degdegga ah, xooggan, adag, midaysan ee Ruushku u adkaysan lahaa haddii ay dhacdo gardarro dheeraad ah, laakiin sidoo kale waxaanu ku samaynay macnaha jawaabta qoran ee aan bixin doono Xiriirka Ruushka, sida aan u samaynaynay annagoo ka jawaabayna wixii aanu ka nidhi meelaha laga yaabo inay suurtagal tahay in horumar laga gaadho tillaabooyinka is-dhaafsiga ah ee kor u qaadi kara amniga wadajirka ah. Iyo amniga wadajirka ah, waxaan ula jeedaa amniga bulshada transatlantic laakiin sidoo kale waxay wax ka qaban kartaa qaar ka mid ah walaacyada uu Ruushku soo bandhigay.
Markaa marka aynu tixgelinno tallaabada xigta ee ka-qaybgalkeena - iyo taasi waa, dhab ahaantii, bixinta jawaab-celin qoraal ah oo ku saabsan Xiriirka Ruushka - waxaan la wadaageynaa fikradahaas annaga - waxaanan la wadaagnay fikradahaas xulafadayada Yurub iyo la-hawlgalayaasheeda. Waxaan qaadanaynaa jawaab celintooda. Waxaan ku daraynaa jawaab celintaas jawaabta qoran. Markaan u diyaargarowno inaan gudbinno, waan sameyn doonnaa. Waxaan filayaa inay taasi noqon doonto usbuucan.
Su'aal: Ned, markaa waxaad tidhi ma jirto wax iftiin ah oo ku saabsan jawaabta, waana arki doonaa taas. Laakin waxaa si cad u jira – oo waa dad waynaha halkaas ka jira – dharaar ku saabsan sifada khatarta. Reer Yurub, Faransiiska, iyo kuwa kale, Mr. Borrell, waxay u muuqdaan inay aad uga xanaaqsan yihiin dhawaaqa naxdinta leh ee Washington ee ku saabsan khatar soo fool leh, waxayna - waxay odhan jireen uma baahnid inaan helno burbur neerfaha ah, waanu haysanaa. in la is dejiyo, mana aragno khatartaas soo fool leh sida uu Maraykanku sheegay. Weli ma waxaad tiraahdaa waxaa jira - waxaa jirta khatar soo fool leh oo duullaan ah? Waa maxay sababta farqiga u dhexeeya adiga iyo reer Yurub?
Qiimaha MR: Francesco, ma aragno farqiga aad tixraacayso.
Su'aal: Waxay leeyihiin. Waxay si cad u sheegaan in -
Qiimaha MR: Waxa aan aragno iyo waxa aad arki karto sidoo kale waa bayaannada. Iyo bayaannada - bayaanka, tusaale ahaan, wuxuu ka yimid guddiga Yurub oo sheegay in si la yaab leh la mid ah haddii kale - haddii aysan ahayn luqad isku mid ah bayaankii ka soo baxay G7 ee NATO ee ku saabsan cawaaqibka ku dhici doona Xiriirka Ruushka haddii ay dhacdo. ee sida gardarada ah ee ka dhanka ah Ukraine. Waxay leedahay - kani ma ahayn Maraykanka oo keliya samaynta kiiskan. Waxaan ula hadlaynay koox ahaan xulafadayada Yurub iyo saaxiibadayada, hay'ado iyo hay'ado dhinacyo badan leh sida NATO iyo OSCE iyo G7. Mar labaad, haddii aad eegto luqadda - oo aanad la yaabi doonin inaad maqasho in tani aanay ahayn ku talo-gal - waxaad arki doontaa luuqad la yaab leh oo la mid ah dhammaan asxaabtayada iyo asxaabtayada iyo guud ahaan hay'adahan caalamiga ah.
Marka ay timaado waxa Ruushku qorsheeyay, waxaa iska cad maalinba maalinta ka dambaysa in qof kastaa arki karo dhismaha baaxadda leh ee ciidamada Ruushku ka wadaan xudduudaha Ukraine. Waxaan aad u caddeeyey walaacayada marka ay timaado noocyada kale ee gardarada iyo daandaansiga ee laga yaabo in Ruushku uu doonayo inuu qaato oo ay hore u qaadeen. Laakiin waxaa jira hal qof oo og waxa uu Ruushka u hayo Ukraine, waana Vladimir Putin.
Hadafkayagu waxa uu ahaa in aanu ka hortagno oo aanu iska difaacno qorshe kasta oo noocaas ah, si la mid ah sida aanu diyaarka ugu nahay in aanu sii wadno wadadii dublamaasiyadda iyo wada hadalka. Waxaad aragteen in aanu ku sii socono dariiqaas dublamaasiyadda iyo wada-hadalka si daacad ah oo sugan toddobaadyadii u dambeeyay. Safarka Xoghayaha ee Geneva usbuucii hore ayaa ahaa kaliya tillaabadii ugu dambeysay ee geedi socodkaas oo sidoo kale ku lug lahaa ku xigeenka Xoghayaha kulamadii ay la qaadatay Xiriirka Ruushka ee Wadahadalka Xasiloonida Istaraatiijiga ah, kulamadii Golaha NATO-Ruushka, ka-qaybgalka macnaha guud. ee OSCE, iyo xulafada kale ayaa sidoo kale ku hawlanaa Federaalka Ruushka ilaa tan.
Markaa si aan si cad u caddayno, waxaan diyaar u nahay inaan sii wadno jidkan. Jidkani waxa uu ku guulaysan karaa oo kaliya haddii ay ku dhacdo xaalad de-kordhinta. Laakiin in aan diyaar u nahay oo aan ku hawlannahay geeddi-socodkii iyo dariiqii dublamaasiyadda iyo wada-hadallada macnaheedu maaha in aynaan isu diyaarinayn difaac iyo is-hortaag. Labadaba waxaan sameyneynaa isku mar si sax ah sababtoo ah waxaan diyaar u nahay doorasho kasta oo uu sameeyo Vladimir Putin.
Su'aal: Oo ma waxaad u malaynaysaa inay jirto khatar weerar oo soo fool leh, oo ah in weerarku soo dhawaado, isla markiiba, sida ay reer Yurub sheegeen inaad u sheegayso, sida ay sheegeen sirdoonkaagu?
Qiimaha MR: Hagaag, waanu ku caddaynay arrintan dhawr goobood, oo ay ku jirto talada qunsuliyadda ee aanu xalay soo saarnay. Khatarta aan aragno waa mid noo cad annaga oo keliya maaha ee waxay u caddahay kormeere kasta oo aan caadi ahayn marka la eego waxa ka dhacaya xudduudaha Ukraine, waxa ka dhacaya gudaha waxa ay tahay in ay noqoto dhulka Belarusiya ee madaxbannaan, waa arrin walaac weyn leh. Sidaas awgeed waxaanu qaadaynaa tallaabooyin taxaddar leh. Annagu, dabcan, waxaan la wadaageynaa macluumaadka iyo sirdoonka xulafadayada oo ka hadlaya walaacayada sidoo kale waxaan la hadlaynaa xaqiiqda ah in Ruushku u muuqdaa inuu diyaar u yahay inuu qaado tallaabo gardarro ah oo ka dhan ah Ukraine wakhti kasta.
Su'aal: Laakiin si aan u raacno qodobka Francesco -
Su'aal: Iyo mid u dambeeya. Miyaynu filan karnaa kulan cusub ama kulan ama kulan muuqaal ah oo u dhexeeya Xoghayaha iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda Lavrov ka dib jawaabta dhow?
Qiimaha MR: Hagaag, waxaad ka maqasheen Wasiirka Arrimaha Dibadda todobaadkii hore. Waxa kale oo aad todobaadkii hore ka maqashay Xoghayaha in aanu bixin doono jawaab qoraal ah. Waxaan u furannahay ka-qaybgalyo dheeraad ah, ka-qaybgal shakhsi ah, haddii ay noqoto - haddii ay noqoto mid faa'iido leh haddii aan u maleyneyno in ay noqon karto mid wax dhisi karta, haddii aan u maleyneyno inay tahay qodobka xiga marka aan raadineyno waddada wadahadalka iyo diblomaasiyadda. Markaa waanu u furannahay.
Su'aal: Ka dib su'aalaha Francesco, dhowr daqiiqo ka hor afhayeenka Pentagon-ka ayaa yiri, waxaanan halkan ku soo qaadanayaa, in haddii NATO ay hawlgeliso NRF, dhammaan waxay u sheegeen tirada ciidamada ee uu Xoghaye Mr. Austin dhigay feejignaan dheeraad ah. ilaa 8,500 oo shaqaale ah. Taas - marka la eego baaxaddaas, danjirihii hore ee Mareykanka u fadhiyay Ukraine John Herbst ayaa u sheegay NPR saaka inuu u maleynayay in hadal kasta oo ku saabsan in ciidamada Mareykanka la geeyo meel ka hortag dheeri ah ay ahayd in hadda ka hor la sameeyo. Waa maxay sababta ay u timid dhamaadka usbuucan in maamulka Biden uu go'aansanayo inuu ciidamada Mareykanka geliyo meel hore loo sii daabulay oo qayb ka ah NATO si asal ahaan fariin loogu diro Vladimir Putin?
Qiimaha MR: Hagaag, aan dhawr qodob soo saaro. Marka hore, waxaan u gudbinayaa saaxiibkay iyo kii iga horreeyayba si aan ugala hadlo qorshayaasha Pentagon-ka ay ku shaqaynayso, laakiin Madaxweynuhu wuxuu si cad u sheegay cawaaqibka ka dhalan kara Ruushka haddii Ruushku uu hore u sii wado gardarrada dheeraadka ah. ka dhanka ah Ukraine. Waxaan ka hadalnay cawaaqibka dhaqaale iyo maaliyadeed ee Ruushku u adkaysan doono siyaalo badan oo aan horay loo arag, tillaabooyin aan si toos ah u dooranay inaanan qaadin wixii ka dambeeyay 2014. Waxaan ka hadalnay heerarka dheeraadka ah ee kaalmada amniga ee difaaca ee aanu waxaa loo diyaar garoobi lahaa in aan siino la-hawlgalayaashayada Yukreeniyaanka ah, oo ka sarreeya $650 milyan oo aan siinay Kyiv sannadkii hore oo keliya. Taasi waa kaalmo amni oo ka badan tii waligeed la siin jiray hal sano gudaheed saaxiibadayada Ukraine.
Laakiin Madaxweynuhu waxa kale oo uu caddeeyey in haddii Ruushku hore u socdo, aanu xoojin doono waxa loogu yeedho dhinaca bari ee NATO. Laakiin xitaa sidaan sheegnay taas, waligeen kama aynaan meesha ka saarin ikhtiyaarka ah in aan bixino kaalmo dheeri ah ka hor duulaan suurtagal ah. Oo sidaas daraaddeed waxaa jira tiro cawaaqib ah oo aan ku qeexnay in Federaalka Ruushka uu u adkaysan lahaa. Waxaa jira dhowr tillaabo oo aan hadda qaadeyno oo ku saabsan kaalmadayada amniga ee difaaca ee Ukraine, marka la eego farriimaha ka hortagga ah ee aan u gudbineyno cawaaqibka ka iman kara Ruushka, iyo hadda waxaad maqlaysaa. oo aan ka helay saaxiibkay Pentagon-ka.
Su'aal: Taas ka dib, wadahadaladan ma ka yeesheen in la isticmaalo ciidamada Mareykanka iyo in kale - taasi miyay qayb ka ahayd jawaabta ka socota maamulka Biden ka hor inta aan warbixinnadan si cad loo ogaan usbuucan? Taasi miyay ahayd qayb firfircoon oo ka mid ah doodii ku saabsanayd sidii wax looga qaban lahaa gardarrada Ruushka?
Qiimaha MR: Waxaan dhihi lahaa guud ahaan, anigoon la hadlin wada tashiyada gudaha, in shay sidan oo kale ah uusan caadi ahaan noqon doonin dadweynaha haddii la soo bandhigo. Waxaan ka fiirsanaynay dhowr tillaabo, waxaadna maqlaysaa Pentagon-ka oo si fagaare ah ula hadlay maanta. Xaqiiqda ah in ay maanta si fagaare ah ula hadlayaan waxa ay soo jeedinaysaa in aanay ahayn shay cusub marka aynu ka fiirsanayno jawaabta waxa aynu hadda arkayno.
Su'aal: Tan ma loogu talagalay inay ka dhigto Ruushka laga yaabo inay dib uga fikiraan geynta ciidamo dheeraad ah gudaha Belarus oo ay isku dayayaan inay xoojiyaan joogitaankooda qaybta koonfureed ee Ukraine?
Qiimaha MR: Hadafkayagu waxaas oo dhan waa inaan difaacno oo iska celino labadaba. Markaa waxaanu qaadaynaa dhawr tillaabo oo dhanka difaaca ah ee Ukrain, oo ay ka mid tahay in aanu bixino kaalmo dhinaca amaanka ah, laakiin waxaanu qaadaynaa talaabooyin dhawr ah oo lagaga hortagayo waxa uu Ruushka iyo Vladimir Putin si gaar ah maskaxda ugu hayo. Markaa su'aashaada, haa.
Su'aal: Kadibna mid kale: Safiirka Maraykanka u fadhiya Qaramada Midoobay ayaa goor hore oo maanta ah warbixin kooban siisay, su’aasha ayaa soo baxday noocee ah wadahadal ay la yeelatay xubnaha kale ee Golaha Ammaanka ee ku saabsan xaaladdan, Ambassador Thomas-Greenfield ayaa xitaa ogolaatay in ay iyada ayaa la hadashay dhigeeda Ruushka. Maxaa lagu soo oogay inay u sheegtay Ambassador Nebenzya khatarta uu Maraykanku u arko madax-banaanida Ukraine? Muxuuse Maraykanku u riixi waayay in golaha ammaanka uu arrintan ka yeesho kulan ka hor inta aanu Ruushku la wareegin madaxtinimada Talaadada soo socota?
Qiimaha MR: Hagaag, waxaan filayaa in aad sidoo kale ka maqasheen Safiirka in ay aad ula macaamili jirtay dhiggeeda Golaha Ammaanka iyo qaybaha kale ee dhiggeeda ah ee UN-ka. Waxay qiratay inay la xiriirtay dhiggeeda Ruushka, laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa - oo waxaan u maleynayaa inaad sidoo kale ka maqashay iyada - in dhiggeeda Ruushka uusan ahayn dhiggeeda kaliya ee ay la hadlayso. Waxaan filayaa inaad ka maqli doontaan iyada oo ku saabsan xidhiidhka ay la leedahay xulafadayada, oo ay ku jiraan kuwa Golaha Ammaanka, iyo saaxiibadayada ayaa aad uga ballaadhan sidii ay ula macaamili jirtay dhiggeeda Ruushka ee Golaha Ammaanka.
Laakin dhanka fariinta, fariinta ay Ruushku naga maqlayeen waa ay iska cadayd oo waliba joogtay. Waxay ahayd mid cad oo joogto ah dadweynaha; waxay ahayd mid cad oo joogto ah si gaar ah. Horta waxaan door bidaynaa dariiqa dublamaasiyadda iyo wada hadalka. Waxaan aaminsanahay inay tahay habka kaliya ee mas'uulka ka ah in lagu sii wado kicinta iyo in la joojiyo gardarada joogtada ah ee Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine iyo waxa - qorshe kasta oo kale oo laga yaabo in Federaalka Ruushku uu kaydiyo. Waxa kale oo ay maqleen - oo ay maqleen arrintan si gaar ah, laakiin sidoo kale si cad - sida aan diyaar ugu nahay wadahadal iyo diblomaasiyad, waxaan wadnaa difaac iyo ka hortag, taasna waannu ka hadalnay. si baaxad leh maantaba. Laakiin Ruushku way ogyihiin, sababtoo ah si toos ah ayay nooga maqleen, in aan diyaar u nahay inaan ku lug yeelano. Waxay og yihiin in ay jiraan arrimo qaar oo aan u maleyneyno in wadahadalka iyo dibloomaasiyadu ay dib ugu soo laaban karaan si wanaagsan amniga wadajirka ah, amniga wadajirka ah ee bulshada transatlantic, waxayna gacan ka geysan kartaa ka jawaabista qaar ka mid ah walaacyada uu sameeyay Federaalka Ruushka.
Laakiin sidoo kale way naga maqleen, tanina sidoo kale waa muhiim, in ay jiraan meelo kale, oo ay ku jiraan siyaasadda "Albaab Furan" ee NATO, halkaas oo aysan jirin meel ganacsi. Dhab ahaantii midna. Haddaba dhammaan hawl-qabadkeenna, hadday tahay Xoghayaha, Ku-Xigeenka Xoghaye, Ambassador Thomas-Greenfield, fariimahaasi waxay ahaayeen kuwo cad oo joogto ah.
Su'aal: Ned, waxaan rabaa inaan baddalo mowduucyada.
Qiimaha MR: Wax kasta oo kale - waayahay, waxaan arkaa inay jiri karaan dhowr su'aalood oo kale. Ben.
Su'aal: Haa, daadgureynta qayb ka mid ah safaaradda waxay si cad u muujineysaa inaad ka walaacsan tahay badbaadada Mareykanka ee Ukraine. Waxa kale oo aad si cad u sheegtay waxa dhici kara haddii Ruushku soo duulo. Ma ka faa'iidaysan doontaa fursadan hadda sidoo kale inaad uga digaan Ruushka inay waxyeello u geystaan ​​​​mareykanka oo aad tiraahdo waxa cawaaqibta ka dhalan karta haddii ay sameeyaan?
Qiimaha MR: Haddaba aan su’aashaas qaato oo aan caddeeyo in aynaan lahayn mudnaan ka sarraysa badqabka iyo badbaadada Maraykanka ee ku nool dunida dacaladeeda. Xalayna waxaad maqashay inaanu la hadalno talaabooyinka xikmadaysan ee aanu ku qaadanayno macnaha guud ee beeshayada diblumaasiyadeed ee Kyiv, anagoo og in Ruushku leeyahay dhismayntan ciidan ee baaxadda leh, inay diyaar u yihiin inay qaadaan tallaabo gardaro ah daqiiqad kasta. Markaa bixitaankii la oggolaaday ee shaqaalaha aan degdegga ahayn ee safaaradeena iyo bixitaannada la amray ee ku tiirsanaanta waa qayb ka mid ah oo ka tarjumaysa mudnaanta koowaad ee aan ku lifaaqno badbaadada iyo amniga dadka Mareykanka.
Ma doonayo in aan galo wadahadalo gaar ah, laakiin waxaan si cad ugu sheegnay Ruushka mudnaanta aan siineyno badbaadada iyo amniga dadka Mareykanka. Waxay og yihiin in taasi tahay mudnaantayada ugu sareysa. Waxay og yihiin inaan aadno waddooyin aan caadi ahayn si aan u ilaalinno ammaankooda iyo ammaankooda. Taasna waan kaga baxayaa.
Su'aal: Marka la eego tirada dadka, dadka Mareykanka ah ee ku sugan gudaha Ukraine, shalay waxaan ogahay in Waaxda Arrimaha Dibadda aan la soo saari doonin tiro sax ah. Laakiin taasi waa sababta oo ah ma ogid inta badan ama ma sheegi doontid inta Maraykan ee ku sugan gudaha Ukraine?
Qiimaha MR: Hadafkayagu had iyo jeer waa in aan ku siino xog sax ah oo waqtigeeda ku habboon, hadda ma hayno tiro aan u aragno in ay sax tahay tirada Maraykanka, Maraykanka gaarka ah, ee deggan Ukraine, aniguna waan sheegi doonaa. adiga sababta. Tan waxaad ku maqashay xaaladda Afgaanistaan, laakiin marka ay Ameerikaanku u socdaalayaan dibadda, dabcan, loogama baahna inay iska diiwaan geliyaan safaaradda dalkaas. Waxaan had iyo jeer ku dhiirigelinaa dadka Maraykanka ah inay iska diiwaan geliyaan marka ay dibadda u safrayaan waxa loogu yeero nidaamkayaga TALLAABO, laakiin waxaan filayaa in badan oo idinka mid ah aad caddayn kartaan, markaad u safarto dibadda inaadan mar walba samayn taas. Qaarkiinna waxaa laga yaabaa inaadan waligood samayn.
Sidoo kale, marka ay dadka Maraykanku dalka ka baxaan, waxay u baahnaan lahaayeen inay is-diiwaangeliyaan. Oo marka la eego in qaar badani aysan isdiiwaangelinin meesha ugu horeysa, waxaan u maleynayaa inay tahay malo ammaan ah in qaar badan - kuwa dhab ahaantii is-diiwaangeliyay aysan naftooda ka saari karin tiradaas muwaadiniinta Mareykanka ee ku nool waddan shisheeye.
Qodobka kale ayaa ah in xitaa marka ay dadku isdiiwaangeliyaan, Waaxda Gobolka ma awoodo inay si madax-banaan u xaqiijiso in qofka iska diiwaan geliyay STEP, waxa loogu yeero nidaamka STEP, uu dhab ahaantii yahay muwaadin Mareykan ah. Markaa waxa jira tiro – sababo dhawr ah dartood, tirinta – hadda ma hayno tiro sax ah.
Markii aan fariin la dirnay dadka Mareykanka ah ee ku sugan - bulshada gaarka ah ee muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan Kyiv, Ukraine maalmihii la soo dhaafay, waxaan ku dhiirigelinay inay buuxiyaan foom naga caawin doona inaan helno qaddarin weyn oo ku saabsan cabbirka bulshada Mareykanka - gaarka ah ee bulshada muwaadiniinta Mareykanka Ukraine. Laakiin taasi maahan wax aan hadda haysanno.
Su'aal: Iyo mid kale. Afgaanistaan ​​baad sheegtay. Waxaan la yaabanahay haddii ay jiraan - ma jiraan wax ka yimid Afgaanistaan ​​oo aad ka baratay aqoonsiga iyo samatabbixinta Maraykanka ee gudaha aagga dagaalka oo aad u maleyneyso in lagu dabaqi karo halkan?
Qiimaha MR: Hagaag, sida iska cad kuwani maaha xaalado la mid ah, sidaa darteed waan necbahay inaan soo jeediyo si kale. Kharashkayaga ugu horreeya waa inaan la socodsiinno bulshada muwaadiniinta Mareykanka horumarka amniga iyo amniga. Taasi waa tii aan samaynay dhawaan fiidnimadii shalay markii aan soo saarnay La-talinta Safarka oo la cusboonaysiiyay iyo Ogeysiiska Warbaahinta ee la socda si aan ula socodsiino horumarka amniga iyo amniga. Taasna waxaa ku jiri kara macluumaadka ku saabsan fursadaha safarka ganacsiga.
Waxaan taas u yeelnay, sababtoo ah, sida Madaxweynuhu sheegay, tillaabada militari ee Ruushku waxay iman kartaa wakhti kasta. Waxaanan wada ognahay oo aanu wada aragnay ifafaalo ay taasi jirto, marka loo eego cudud ciidan oo baaxad leh. Waxa kale oo aanu caddaynay in aanan awood u yeelan doonin in aan daadgureeyo muwaadiniinta Maraykanka, muwaadiniinta gaarka ah ee Maraykanka, xaalad caynkaas ah. Taasina waa sababta aan ugu dhiirigelinay muwaadiniinta Mareykanka ee gaarka ah ee ku sugan Ukraine inay si habboon u qorsheeyaan, oo ay ku jiraan iyagoo ka faa'iidaysanaya ikhtiyaarrada ganacsi haddii ay doortaan inay dalka ka baxaan. In kasta oo aan yareyno xajmiga cagta safaaradeena, safaaraddu waxay u joogtaa inay ka caawiso muwaadiniinta Mareykanka arrintan. Waxaan ku jirnaa a - waxaan awood u leenahay inaan bixino, tusaale ahaan, deyn dib u celinta qof kasta oo Mareykan ah oo doonaya inuu ka faa'iideysto fursadaha ganacsi ee uu ku laabanayo Mareykanka.
Su'aal: Ned -
Su'aal: Ma la socon karaa -
Su'aal: Haddi aadan waxba ka qabin.
Su'aal: Marka hore, maxaad doonaysaa inaad ka gaadho kulanka - in Biden uu la yeelanayo - madaxda Yurub? Malaha waxay ku dhisan tahay kulanka Mr. Blinken saaka. Haddaba maxaad doonaysaa inaad taas ka gaadho?
Laba, kulankii saaka uu Mr. Blinken la yeeshay golaha Yurub, ma ka helay su'aalo ku saabsan go'aanka Maraykanku ku bilaabay dhimista safaaradda? Sababtoo ah qaar ka mid ah Yurubiyaanka maaha kuwo isku mid ah, iyo sida uu Francesco sheegay, waxaan soo jeedinaynaa in hal-abuurka loo baahan yahay in la garaaco, in aysan jirin wax farqi ah oo dhinaca amniga ah oo soo jeedinaya weerar soo socda. Haddaba maxaad filaysaa inaad gaadho, muxuuse Mr. Blinken ka maqlay habka Maraykanka?
Qiimaha MR: Haddaba, sida aad sheegtay, Barbara, waxa ay xog-hayuhu ka qayb-qaadatay gelinkii hore ee maanta Golaha Arrimaha Dibedda ee Midowga Yurub. Waxaa lagu casuumay wakiilka sare ee Midowga Yurub Josep Borrell. Si aan dhadhanka middaas kuugu siino, Xoghayuhu wuxuu uga warbixiyey dhiggiisa booqashadii uu todobaadkii hore ku tagay Kyiv, Berlin, iyo Geneva. Iyada oo qayb ka ah dadaalka, waxaan la hadalnay - si aan u dejino xiisadda ka dhalatay dhisitaanka militariga Ruushka ee aan loo meel dayin iyo gardarrada joogtada ah ee uu ku hayo Ukraine.
Wadashaqeyntii saaka, xoghayuhu wuxuu ku nuuxnuuxsaday inaan sii wadi doono wada shaqayn dhow oo aan la leenahay Midowga Yurub iyo wadamada xubnaha ka ah marka lagu daro hay'adaha kale ee dhinacyada badan leh ee aan horay u soo sheegnay. Taasi waa NATO, taasi waa OSCE, iyo xulafada gaarka ah iyo la-hawlgalayaasha. Intii uu socday kulankan, xoghayuhu wuxuu muujiyay in uu warbixin ka siiyay hawl-qabadkii usbuucii hore, dabcan oo ay ku jirto la-hawlgalkii Wasiirka Arrimaha Dibadda Lavrov.
Waxa aad arkaysay in wax yar ka dib kulankii uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Lavrov oo la soo gebagebeeyey Jimcihii, in xoghayuhu uu sidoo kale fursad u helay in uu la hadlo dhiggiisa Ukraine si uu uga warbixiyo wada-hadalladaas, taasina waa dhaqan aannu ku tallaabsannay intii aanu wadnay dhammaan hawlgelintayada - xulafadayada Yurub, la-hawlgalayaashayada Yurub, dabcan oo ay ku jiraan la-hawlgalayaasheeda Yukreeniyaan, sababtoo ah waxaan ku shaqeyneynaa ugu badnaan waxba iyaga la'aantood. Ma jiraan wax ku saabsan Ukraine la'aanteed. Wax ku saabsan Yurub la'aanteed ma jiraan. Wax ku saabsan NATO la'aanteed NATO ma jirto.
Haddaba ka qayb galka xoghayuhu ee shirka maanta waxa ay ahayd fursad kale oo goob kale ka dhacday in aanu taas samayno. Madaxwaynuhu, dabcan, si qoto dheer ayuu arrintan uga qayb qaatay. Waxaad aragtay inuu isugu yeedhay kooxdiisa, shakhsi ahaan iyo ahaanba ahaanba, Camp David dhamaadkii usbuuca si uu ugala hadlo arrintan. Markaa maaha wax lala yaabo in Madaxwaynuhu uu fursad u helo in uu arrimahan laftiisa kala hadlo dhiggiisa isaga oo sidaas oo kale maanka ku haya.
Markay timaaddo go'aankii aanu xalay gaadhnay, waxaan rabaa in aan ku celiyo nuxurka nuxurka ah, taas oo ah in tani ay ku saabsan tahay hal shuruud iyo hal shuruud oo keliya, taasina waa badbaadada iyo ammaanka kooxdayada dhulka ee Ukraine. . Waxayna ahayd tallaabo taxaddar leh markii ay timaaddo bixidda amarrada ee dadka ku tiirsan. Waxay ahayd tallaabo taxaddar leh markii ay timaaddo bixitaan la oggolaaday ee shaqaalaha aan muhiimka ahayn.
Laakiin sidoo kale aan caddeeyo in go'aankaasi aanu waxba ka sheegin go'aankayaga madaxbannaanida Ukraine iyo madax-bannaanida dhulkeeda. Ballanqaadkayaga ku aaddan madaxbannaanida Ukraine iyo wadajirka dhuleed waa mid aan leexleexad lahayn. Safaaradda ayaa sii wada shaqadeeda, masuulkana, dabcan, waxa uu ku hadhay Ukraine. Xaqiiqda ah in aan u qaadaneyno taxaddar taxaddar leh aawadood iyo badbaadada muwaadiniinta Mareykanka sinaba uma wiiqi karto taageeradayada ama ballankayaga Ukraine. Waxaad aragtay in taageerada ay qaadanayso tiro kasta oo foom ah.
Dabcan, Xoghayuhu waxa uu ku sugnaa Kyiv usbuucii hore, halkaas oo aad maqashay isaga oo ku celcelinaya fariimahan ku xiga Madaxweyne Zelenskyy, oo ku xiga Wasiirka Arimaha Dibada Kuleba. Waxaan sii wadnay bixinta kaalmada amniga ee difaaca. Gaadhidii u horaysay ee qaybinta dheeraadka ah ee $200 milyan ee la oggolaaday Diseembar waxay timid Kyiv habeenimadii Jimcaha ilaa Sabtida. Waxaan sii wadi doonaa inaan siino taageerada amniga ee difaaca ee la-hawlgalayaashayada, waxaanan sii wadi doonnaa inaan si shaki la'aan ah u muujinno ballan-qaadka joogtada ah ee aan u hayno madaxbannaanida dhuleed iyo madax-bannaanida saaxiibkayaga Ukraine.
Su'aal: Ma la socon karaa taas?
Qiimaha MR: Fadlan.
Su'aal: Sababtoo ah waxaad mar kale sheegtay in ay tahay tillaabo caqli-gal ah, balse dowladda Ukraine ayaa si cad uga hortimid tallaabadan, wasaaradda arrimaha dibadda ayaana maanta ku tilmaantay taxadar xad dhaaf ah. Ma jiraa dareen maamulka ku jira oo ah in tani ay argagax ka dhex abuuri karto Ukraine dhexdeeda xilli taasi ay tahay waxa uu Ruushku isku dayayo in uu sameeyo isaga oo kicinaya xasillooni darrada dalka?
Qiimaha MR: Tani waxay ku saabsan tahay hal shay iyo hal shay oo keliya, waana -
Su'aal: Ma ka fiirsatay argagaxa ay abuuri karto?
Qiimaha MR: Waan ka xumahay. Ma waxaan nahay?
Su'aal: Ma tixgelisay argagaxa ay abuuri karto?
Qiimaha MR: Waxa aan tixgelinnay waa badbaadada iyo amniga dadka Mareykanka. Tanina waa go'aan kaliya oo ay gaari karto dowladda Mareykanka sababtoo ah waa mudnaanta inaan ku xirno badbaadada iyo amniga, kiiskan, asxaabteena iyo qoysaskooda sidoo kale. Tani waxba ma odhanayso taageeradayada aan kala go'a lahayn, ee aan kala go'a lahayn ee la-hawlgalayaashayada Yukreeniyaanka. Waxay ku saabsan tahay hal shay iyo hal shay oo keliya: nabadgelyada aadka u cidhiidhsan iyo tixgelinta amniga ee asxaabtayada.
Su'aal: Laakiin tan oo lagu daray ku dhawaaqida Pentagon-ka ee maanta ee ku saabsan in la geliyo 8,500 oo askari oo heegan ah, marka lagu daro soo bandhigida dadweynaha ee jimcaha ee imaatinka gargaarka cusub ee dilaaga ah, waxay u muuqataa inaad sii kordhinayso cadaadiskaaga halkan Russia si uun. Ma diiday taas? Ma u malaynaysaa in mawqifkaagu uu isbedelay gabi ahaanba?
Qiimaha MR: Tani waxay ku saabsan tahay difaaca iyo ka hortagga. Waxa aan ka walaacsanahay waa suurtagalnimada gardarrada Ruushka. Taasi difaac maaha. Taasi maaha wax ku saabsan joojinta. Taasi waxay ku saabsan tahay hawlgallada weerarrada ah ee ka dhanka ah waddan madaxbannaan, waddan madaxbannaan oo saaxiib dhow la ah Maraykanka. Markaa in la isla simo labadan shay waa mid aan sax ahayn, sidoo kale waa waxa aan ka maqlayno Moscow. Kuwani waa xubno tayo leh oo kala duwan iyo tallaabooyin kala duwan oo aan qaadeyno. Haddii Ruushku hoos u dhigo, ma arki lahayd si sax ah dhaqdhaqaaqyo isku mid ah oo ka yimaada la-hawlgalayaasha Yukreeniyaan, NATO, ee ka imanaya Maraykanka.
Waa tan qodobkii ballaadhnaa, waxaadna maqashay in Xoghayuhu uu arrintan ku celcelinayo. Waxa uu dhab ahaantii kulankii uu la yeeshay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Lavrov Jimcihii si toos ah tan, wuxuu si toos ah u sheegay qodobkan Wasiirka Arrimaha Dibadda. Waxa uu sheegay in Maraykanku aanu si dhab ah u fahmin istiraatijiyadda Ruushka ee halkan sababtoo ah sannadihii la soo dhaafay iyo xaaladda sii kordhaysa, Vladimir Putin iyo Federaalka Ruushka waxay soo dedejiyeen wax kasta oo ay doonayeen inay ka hortagaan. Waxaadna maqashay Xoghayaha oo ka hadlaya taageerada sii kordheysa ee xubinimada NATO ee reer Yukreeniyaan tan iyo 2014, heerarka taageerada oo labanlaabmay. Waad maqasheen annaga iyo NATO oo isbahaysi ahaan ka hadlaysa dadaallada hubinta ee ay soo dedejisay gardarrada aan loo meel dayin ee Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine 2014kii.
Markaa waxa laga yaabaa in Ruushku si fiican uga cawdo oo laga yaabo inay si fiican u fiirsadaan oo ay u tilmaamaan dadaalladan ku wajahan difaaca iyo ka hortagga, laakiin waa gardarada ay soo dedejisay sida saxda ah waxaynu maqalnay oo aragno iyaga oo tilmaamaya.
Oo halkan waa welwelka kale, oo annagu ma aannu samayn wax lafo ah oo arrintan ku saabsan: welwelkayaga in Ruushku, sidii ay sameeyeen 2014, laga yaabo inay raadiyaan marmarsiiyo gardarrada dheeraadka ah ee Ukraine. Haddii aad rabtay inaad taas samayso, tani waa siyaabo qaar sida ay u ekaan lahayd. Taasi waa ta in muddo ah ina danaysay. Waa sababta aan uga hadalnay welwelkaas oo keliya si ballaaran, laakiin sababta aan u gudbinay macluumaadka aan hayno gaar ahaan ka hadlaya tillaabooyinka uu Federaalka Ruushku qaadi karo dhamaadkan.
Su'aal: Ma heli karaa mid kale, fadlan?
Qiimaha MR: Aan u ogolaado Conor inuu dhammeeyo.
Su'aal: Maya, taasi waa caadi. Kaliya hal su'aal oo u dambeysa oo gaar ah oo ku saabsan su'aasha midnimada NATO. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa mar kale sheegay in Jarmalku uu wiiqayo midnimada Isbahaysiga, qayb ahaan sababtoo ah waxay ka horjoogsanayaan Estonia inay hubka u wareejiso, iyagu ma siin doonaan hub laftooda, faallooyinka taliyehooda badda ee usbuuca - ama usbuucii hore. Wax jawaab ah ma ka haysaa taas, fikradan ah in Jarmalku aanu wax ku filan ka qaban gudaha Isbahaysiga si uu u taageero halgan midaysan?
Qiimaha MR: Xoghayuhu waxa uu fursad u helay ma aha oo kaliya in uu la kulmo Chancellor Scholz, laakiin sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Baerbock usbuucii hore ee Berlin, iyo wasiirka arrimaha dibadda ayaa dhab ahaantii la weydiiyay su'aashan taagan si sax ah Xoghayaha. Waxayna si sax ah uga hadashay waxa Jarmalku qabanayo, wax ku biirinta muhiimka ah ee Jarmalku ku samaynayo Ukraine. Waxaan uga tagi doonaa Jarmalka si aan ula hadlo wax ku darsigaas muhiimka ah. Laakiin si cad, ma jiraan wax iftiin ah oo ka dhex jira xulafadayada iyo asxaabtayada oo ku saabsan cawaaqib xumada ka iman karta Federaalka Ruushka haddii ay hore u socoto.
Su'aal: Sidee bay u ekaan kartaa kicinta?
Su'aal: Kaliya hal shay oo ku saabsan Ukraine, hal shay oo u dambeeya Ukraine.
Su'aal: Ma dejin lahayd - sidee bay u ekaan kartaa kicinta? Waxaan ula jeedaa, ma haystaan ​​- hadda, waxaa lagu eedeeyay in ay haystaan ​​​​100,000 oo askari oo ku sugan dhulkooda oo ku yaala xuduudka. Markaa dejintu waxay u ekaan lahayd malaha haddii ay la baxaan 25,000 oo askari? Waxaan ula jeedaa, sidee bay u ekaan kartaa kicinta?
Qiimaha MR: Waxaa ku jiri kara taas. Ma noqon doono mid qoraal ah.
Su'aal: Ma jiraa, sida, sawir aad jeclaan lahayd inaad aragto?
Qiimaha MR: Bal eeg, anigu kama qori doono arrintaas. Waxay ila tahay in de-korontadu ay yeelan karto qaabab badan. Waxay qaadan kartaa qaabka waxa aan aragno iyo waxa aan ku aragnay xuduudaha Ukraine. Waxay qaadan kartaa qaabka waxa aan ku aragno marka la eego dhaqdhaqaaqa Ruushka ee waxa noqon kara waddan kale oo madaxbannaan, Belarus. Waxay qaadan kartaa qaabka waxa aan ka maqlayno Federaalka Ruushka. De-escalation waxay qaadan kartaa qaabab badan.
Waxay qaadan kartaa qaabab badan oo ah tallaabo bilow ah, taasina waa waxa aan jeclaan lahayn inaan aragno ujeedada ugu dambeysa ee maskaxda ku haysa inaan aragno ciidamada Ruushka oo ku soo laabanaya xeryahooda joogtada ah, si ay u joojiyaan tan oo ay u joojiyaan oo u beddelaan dhismahan xuduudaha Ukraine. in la joojiyo hadalada gardarada ah. De-escalation waxay qaadan kartaa qaabab badan. Waanu soo dhawaynaynaa mid ka mid ah.
Su'aal: Markaa kaliya - kaliya haddii ciidamada Ruushku ay ku soo laabtaan xeryahooda mar walba waxay noqon doontaa - waxaa loo tixgelin doonaa hoos u dhigista?
Qiimaha MR: Maya. Ujeedadaydu waa inay jiraan qaabab badan oo de-escalation ay qaadan karto. Waxa kale oo jira taxane Waanu soo dhawaynaynaa, ugu yaraan sidii tallaabo hore, nooc kasta oo kicinta.
Qiimaha MR: Haa.
Su'aal: Haa, ma ka warqabtaa kulanka Arbacada ka dhici doona Paris ee u dhexeeya saraakiisha Ukraine iyo Ruushka, ma waxaad filaysaa wax horumar ah?
Qiimaha MR: Haa, sidaas darteed ma filayo in Maraykanku ku lug leeyahay arrintaas. Aan aragno. Sida aad ogtahay, waxaan la tashanaynaa xulafada iyo asxaabta, oo ay ku jirto Ukraine, si loo go'aamiyo tillaabooyinka soo socda, waxaana sidoo kale xiriir la leenahay Federaalka Ruushka, sidaan sheegnay. Waxaan aaminsanahay in dublamaasiyadu tahay dariiqa ugu wanaagsan ee hore loo mari karo, waxaanan diyaar u nahay inaan taageerno wadahadal iyo diblomaasiyad u adeegaya dejinta xiisadaha. Markaa waxaanu ku taageeraynaa dedaaladaas ay si niyad sami ah ugu fulinayaan dhinaca Federaalka Ruushka.
Su'aal: Ma aragtay tweets-ka dhiggaaga Ukraine, af hayeenka? Waxa uu ku soo qoray bartiisa twitter-ka anagoo ku guda jirna warbixinta. Si degdeg ah ayaan u akhriyi doonaa: “Waxa jira 129 ergay oo dublamaasiyadeed Ukraine. Kuwaas, kaliya afar ka mid ah ayaa ku dhawaaqay bixitaanka xubnaha qoyska ee shaqaalaha: US, UK, Australia iyo Germany. Inta soo hartay, oo ay ku jiraan EU, OSCE, COE, NATO, iyo UN, ma aysan muujin rabitaankooda ah inay raacaan tillaabooyinkan degdega ah." Jawaab ma u haysaa taas?
Qiimaha MR: Ma qabo.
Su'aal: Waxaan maqalnaa inay yihiin -
Qiimaha MR: Taas jawaab uma hayo. Faaladayda kaliya waxay noqon lahayd waxaad maqashay inaan horay u idhi. Tani waxay ku salaysan tahay hal shuruud iyo hal halbeeg oo keliya. Waa mudnaanta aan ku xirno badbaadada iyo amniga asxaabtayada Ukraine.
Su'aal: Hagaag Waxaan qabaa su'aal Iran ah - raali ahow.
Qiimaha MR: Ma jiraan wax kale oo ku saabsan Russia-Ukrain? Haa
Su'aal: Waxaan hayaa dabagal ku saabsan daadgureynta. Waxaan ka imid warbaahinta Yukreeniyaan -
Qiimaha MR: Ah, soo dhawoow.
Su'aal: - waxaanan rabaa inaan caddeeyo in Maraykanku aanu daadgureyn dublamaasiyiinta xitaa maalintii ugu xumayd siddeedii sano ee la soo dhaafay. Waxayna Kyiv aad uga fog tahay xadka Ruushka. Waxay ka dhigan tahay in aqoontaada iyo sirdoonkaaga, caasimadeena - caasimadda Yukreeniyaan waa bartilmaameedka ugu weyn ee duulaanka Ruushka?
Qiimaha MR: Hagaag, eega, dabcan, anigu la hadli maayo wax sirdoon ah, laakiin sidaan sheegnay, oo ay ku jiraan ku dhawaaqistii xalay, waxaan u sameyneynaa tan tallaabo taxaddar leh sababtoo ah dadaalka Ruushka ee sii socda ee lagu xasilinayo dalka iyo in la wiiqo amniga muwaadiniinta Ukrain iyo kuwa kale ee booqanaya ama degan Ukraine.
Su'aal: Saraakiisha Maraykankuna waxay si isdaba joog ah u sheegeen - oo sidaas ayaad tahay - inaadan ka quusan dadaallada diblomaasiyadeed ee Ruushka. Fadlan ma caddayn kartaa? Waxaad hore uga sheegtay amniga - ilaalinta wadajirka ah. Maxaa si sax ah uga jeedaa? Halkee ka banaan tahay wada xaajoodka Ruushka? Maxayse tahay mawduuca tanaasulku?
Qiimaha MR: Markaa waxaanu si joogto ah u sheegnay inaanu diyaar u nahay inaanu wada hadal iyo diblomaasiyad galno, waxaanu wada-hadal iyo diblomaasiyad la galnay Federaalka Ruushka anagoo og, in Ruushku daabacay labadoodii heshiis. Waxaa jira qodobo gaar ah oo ku jira heshiisyadaas, sida aad maqasheen si isdaba joog ah, kuwaas oo aan gabi ahaanba bilow ahayn, oo ay ku jiraan siyaasadda NATO ee loogu yeero "Albaab Furan".
Laakiin waxaa jira meelo kale oo - halkaas oo wadahadal iyo diblumaasiyadu ay gacan ka geysan karaan hagaajinta amniga wadajirka ah, amniga transatlantic. Waxaan fikradda ka dhigayaa in xitaa ka hor intaanay bilaabin dhismahan milatari ee Ruushka ee xuduudaha Ukraine, waxaan horey u qaadnay laba shir oo ah Wadahadalka Xasiloonida Istaraatiijiga ah, goobta uu ku-xigeenka Xoghaye Sherman u isticmaalay usbuuca kale si uu ula kulmo dhiggeeda Ruushka si aan ugala hadalno qaar ka mid ah kuwan. arimaha. Xaqiiqda ah in waxa loogu yeero SSD uu bilaabmay ka dib shirkii u dhexeeyay Madaxweyne Putin iyo Madaxweyne Biden bishii June waxay ka hadlaysaa xaqiiqda ah inaan aaminsanahay inay jiraan arrimo marka ay timaado xakamaynta hubka, tusaale ahaan, halkaas oo aan suurtagal ahayn in aan wadahadalo miro leh la yeelan karno. Ruushka oo wax ka qaban kara walaacayada amniga, oo la macno ah kuwa Maraykanka iyo xulafadayada iyo saaxiibadayada, iyo sidoo kale waxay ka jawaabi karaan qaar ka mid ah walaacyada uu Ruushku sheegay. Markaa waxaan si gaar ah uga hadalnay meelaynta gantaallada ee Yurub, fursadaha istaraatiijiyada iyo hubka nukliyeerka ee aan istiraatiijiga ahayn, tallaabooyinka kale ee xakamaynta hubka, iyo kuwa loogu talagalay in lagu kordhiyo daahfurnaanta iyo xasilloonida.
Qodobka ugu muhiimsan ee taasi waa in tallaabo kasta oo aan qaadi lahayn aysan noqon doonin tanaasul. Waxay u baahnaan lahaayeen in ay noqdaan kuwo ku salaysan is-dhaafsi, taasoo la macno ah in Ruushku sidoo kale ay tahay inay sameeyaan wax gacan ka geysanaya hagaajinta amnigeena - booskayada amniga.
Qodobka kama dambaysta ah ee arrintan ku saabsan: Waxaas oo dhan waxay ahaayeen oo ay sii wadi doonaan in la qabto iyada oo la tashi buuxa oo buuxda lala yeelanayo xulafadayada iyo la-hawlgalayaashayada, waxaana ku jira Ukraine. Markii uu Xoghayuhu la kulmay Madaxweyne Zelenskyy, markii uu la kulmay Madaxweyne Kuleba - ama Wasiirka Arrimaha Dibadda Kuleba, markii uu la hadlay Wasiirka Arrimaha Dibadda Kuleba Jimcihii ka dib markii uu la kulmay Wasiirka Arrimaha Dibadda Lavrov, waxaan ku jirnaa dhaqanka ah inaan si buuxda u daahfurno saaxiibadayada Ukraine oo ku saabsan Arrimaha laga hadlayo iyo halka ay marayso hawl-galadaasi.
Su'aal: (Lama maqli karo) qadiyadda Falastiin?
Qiimaha MR: Ma jiraan wax kale oo ku saabsan Russia-Ukrain? Ben, mid -
Su'aal: Haa Xoghayuhu wuxuu u socday inuu kor u qaado Paul Whelan iyo Trevor Reed wada hadalladii uu la yeeshay Wasiirka Arrimaha Dibadda Lavrov. Ma jiraan wax cusbooneysiin ah? Ma kula tahay in xaaladda hadda jirta ay ka sii roonaan doonto ama uga sii dari doonto xaaladdooda?
Qiimaha MR: Taasi runtii waxay ku xiran tahay Federaalka Ruushka. Waxaan xaqiijin karaa, sida uu Xoghayuhu sheegay ka hor kulanka, in uu kor u qaaday kiisaska Paul Whelan iyo Trevor Reed, oo labaduba u socdaalay Ruushka si ay u dalxiis tagaan, kuwaas oo lagu hayo caddaalad darro muddo aad u dheer, ayaa tilmaamay in ay tahay. waqti dheer oo la soo dhaafay si aan u aragno iyaga oo nabad qaba dib ugu laabtay qoysaskoodii. Taasna waan sii wadi doonaa.
Su'aal: Waad ku mahadsan tahay, Ned. Mid kale oo ku saabsan xiisadda Ruushka iyo Yukreeniyaan. Maamulka Biden ma aqoonsanayaa ama ma garwaaqsan yahay in duullaan kasta ama duullaan kasta oo Ruushka ka dhanka ah Ukraine uu kicin karo saameyn dominos ah arrimo badan? Waxaan magacaabi doonaa tusaalooyin qaar: Shiinaha oo ka dhan ah Taiwan; Iran iyo wakiiladeeda; Kuuriyada Waqooyi iyo gantaaladeeda ballistic-ga ee ka dhanka ah Kuuriyada Koonfureed iyo Japan; Venezuela, Cuba, iyo xeeladahooda xakamaynta iyo dhaqaaqa.
Markaa Ned, adduunka oo dhan ayaa eegaya waxa Maraykanku samaynayo si uu u joojiyo Ruushka. Sideed uga faalloonaysaa arrintan?
Qiimaha MR: Maxay ahayd qaybtii u dambaysay? Sideen ku samaynaa?
Su'aal: Sideed uga faalloonaysaa arrintan? Maamulka Biden miyay ka warqabaan sida ay dunidu u tahay mid muhiim u ah? Sida wixii ka dhacay Afgaanistaan, ka dibna warbixinnada qaar ayaa sheegaya in Ruushku uu qaadayo bog ka mid ah wixii Afgaanistaan ​​ka dhacay oo ka soo horjeeda Ukraine - ama laga yaabo inay guuraan - markaa hadda haddii ay sidaas sameeyaan, dhammaan saameyntan dominos-ka ayaa dhici karta.
Qiimaha MR: Hagaag, ka hor intaanan u gudbin su'aashaada ballaadhan, waxaan rabaa inaan ka hadlo qaybta ugu dambeysa ee su'aashaada, waana Afgaanistaan.
Waxa igu adag in aan fahmo sida ay tahay in la soo afjaro ballan-qaadkii milatari ee 20-ka sano socday halkaas oo Maraykanku ku kharash gareeyay balaayiin doollar sannad kasta, halkaas oo kumannaan askari oo Maraykan ah - hal dhibic tobanaan kun oo ciidamo Maraykan ah - ay joogeen. fadhiya; halkaas oo ay jirtay ballan-qaadkii NATO, halkaas oo kumannaan ka tirsan ciidammada NATO ay sannado badan joogeen, oo ay khasaare dhimasho iyo dhaawacba soo gaadheen, oo khasaarihii naftii ka soo gaadhay u dulqaatay ballan millatari oo furfuran – sidee baynu ahaan jirnay – bay ahayd arrintu, sidee baynu ahaan doonnaa. meel fiican oo istaraatiijiyad ah si aan u qaadano waxa aan hadda ka aragno Federaalka Ruushka.
Madaxweynuhu waxa uu caddeeyey markii uu ku dhawaaqay in aanu joojinayno hawl-galka ciidan ee Afgaanistaan, in qayb ka mid ah sababta aanu sidaas u samaynay aanay ahayn oo kaliya in aanu ka hortagno jiil kale oo ka tirsan ciidamada Maraykanka ama kuwa NATO ka tirsan inay dagaalamaan. oo laga yaabo inay ku dhintaan Afgaanistaan, laakiin si ay noogu ogolaato inaan diirada saarno hanjabaadaha iyo fursadaha qarniga 21aad. Oo sidaas daraaddeed markaan qaadno gardarradan Ruushka ah, markaan raadineyno inaan ku galno jidkan difaaca iyo ka hortagga, taasi waa sida saxda ah waxaan sameyneyno.
Markaa waxaan rabay inaan ka hadlo qodobka ku saabsan Afgaanistaan.
Su'aal: Laakiin Ned, waxa ay ila tahay arrintu waa maamulkii ( lama maqli karo) oo dhabarka u jeediyey xulafadiisa halkaas, dad badan baa u arkayay; malaha xulafada ayaa ka walaacsan in taasi hadda dhacdo.
Qiimaha MR: Horta Maraykanku dhabarka uma jeedin Afgaanistaan. Waxaad aragteen annagoo si joogto ah ula shaqaynayna oo muujinayna sida ay uga go'an tahay dadka Afgaanistaan, taasna waxaan samaynay dhowr siyaabood. Uma baahni inaan hadda dhex maro iyaga sababtoo ah waxaan si joogto ah u aragnaa tan.
Haddaba qof kasta oo qaadanaya cashar aan ka ahayn in Maraykanku uu dareemay in la gaadhay xilligii la soo afjari lahaa wax u ahaa ballan-qaad ciidan oo furfuran oo ay kumannaan kun oo askari Maraykan ahi ku dagaalameen, kumannaanna ay ku dhinteen, isla sidaas oo kale. NATO sidoo kale, waxay jabisay Maraykanka iyo saaxiibadayada NATO ee balaayiin balaayiin - trillions muddo 20 sano ah; Qof kasta oo wax cashar ah ka qaadan lahaa arrinkaas aan ka ahayn in Maraykanku isu taagayo sidii uu uga hortagi lahaa khataraha iyo fursadaha ina soo food saartay hadda, inta aan sii wadno iskaashiga iyo taageerada dadka Afgaanistaan, taasi waxay noqon doontaa falanqayn khaldan.
Laakiin su'aashaada, inkastoo, waanu ka fikirnay taas. Taasina waa sababta saxda ah ee uu Xoghayuhu ka jeediyay Berlin usbuucii hore oo runtii ku saabsanayd su'aashan, si uu u muujiyo in waxa aan aragno in Ruushku isku dayay oo uu ka qaaday Ukraine ay muhiim u tahay lafteeda, dabcan. Ukraine waa lammaane dhow; waxaan ku leenahay saaxiibo dhow dadka Yukreeniyaan. Laakiin siyaabaha qaar, tani waxay la mid tahay muhiimada Ukraine, xitaa way ka weyn tahay su'aasha isku dhaca, iskahorimaad uu Ruushku soo saaray, oo u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Tani waxay ku saabsan tahay waxa ay tahay in ay noqdaan xeerarka lama-taabtaanka ah ee loogu yeero xeerarka ku salaysan nidaamka caalamiga ah, waxa ay noqon karaan xeerar lama taabtaan ah oo 70-kii sano ee la soo dhaafay, tan iyo dhamaadkii dagaalkii labaad ee aduunka, ayaa ilaaliyay oo runtii oggolaaday heerar amni oo aan horay loo arag. , xasilooni, barwaaqo. Taas waxaa ku jira - gudaha Yurub, laakiin sidoo kale waxaa ku jira meelaha intaas ka baxsan.
Dabcan, waxaad maqashaa annaga oo ka hadlayna nidaamka caalamiga ah ee ku salaysan qawaaniinta ma aha oo kaliya kiiska Yurub iyo waxa Ruushku sameynayo si loo wiiqo, laakiin gobollada kale, gaar ahaan Indo-Pacific, halkaas oo aanu walaac la mid ah ka qabno waxa. Wadamada qaarkood ayaa sidoo kale doonayey inay sameeyaan si ay u wiiqaan, si ay u burburiyaan nidaamkaas ku salaysan nidaamka caalamiga ah. Markaa nagama lumin in Ruushku iyo saamaynta waxa ay samaynayaan, sida ay muhiimka ugu yihiin Ukraine, ay si fiican uga gudbaan Ukraine.
Su'aal: Ned, waxaan hayaa laba su'aalood oo ku saabsan Iran iyo Kuwait.
Su'aal: Ned, ma weydiin karaa -
Qiimaha MR: Hubaal, waan kuu soo laaban doonaa. Ayuu yidhi.
Su'aal: Waxaad ii yeedhay sidii saddex jeer, ama laba jeer.
Qiimaha MR: Ayaad tidhi, mar hore ayaad waydiisay -
Su'aal: Waa caadi. Maya, waan fahmay
Qiimaha MR: Horay ayaad su'aal u waydiisay intii lagu jiray warbixintan kooban.
Su'aal: waan fahmay Waxaan rabaa in aan baddalo mowduucyada, in kastoo. Waxaan rabaa in aan wax ka weydiiyo falastiini-Maraykanka oo ku dhintay gacanta Israa’iil 12-kii Janaayo. Hadda, waan ogahay inaad u yeedhay reer binu Israa'iil oo aad doonaysay inaad aragto sida ay xaaladuhu ahaayeen iyo wixii la mid ah. Horta miyay kuugu jawaabeen? Waxaan ula jeedaa, taasi waxay noqon kartaa mid ka mid ah walaalahay.
Qiimaha MR: Waan ka xumahay, maxay ahayd qaybtii u dambaysay?
Su'aal: Waxaan ula jeedaa, taasi waxay noqon kartaa - waligaa. Waxaan leeyahay, ma kuu jawaabeen?
Qiimaha MR: Markaa wali maanu arag warbixintii u dambaysay ee ka soo baxday dawladda Israa’iil. Waxaan sii wadeynaa inaan taageerno baaritaan dhab ah oo lagu sameeyo xaaladda dhacdada. Waxaan soo dhaweyneynaa inaan helno macluumaad dheeri ah oo ka yimaada Dowladda Israel sida ugu dhaqsaha badan. Waxaan aad uga walaacsanahay warbixinnada ay warbaahintu ka qortay xaaladdaha ku xeeran geerida Mr. Assad, oo ah muwaadin Mareykan ah, kaasoo meydkiisa la helay ka dib markii ay ciidamada Israa’iil xireen. Sidaan horey u sheegnay, waxaan si dhow ula xiriirnay qoyskiisa si aan uga tacsiyeyno, si aan u bixinno adeegyada qunsuliyada. Waxaa naloo soo wakiishay mudane Assad sidoo kale.
Su'aal: Hagaag, wuxuu dhintay isagoo gacmaha laga xiray oo la qoorsaday iyo wixii la mid ah. Iyo noocee ah - miyay - ma waxaad siisaa waqti xaddidan? Miyaad ku kalsoon tahay Israa'iiliyiinta inay sameeyaan baaritaan u gaar ah kiiskan?
Qiimaha MR: Sidaan sheegay Siciid, waanu soo dhawaynaynaa in sida ugu dhaqsaha badan loo helo xogtaas.
Su'aal: Hagaag Waxaan qabaa su'aal kale oo degdeg ah. Waxaa jira warar sheegaya inay jiraan 17 wariye oo Falastiini ah oo maanta la xidhay. Taasi ma tahay wax aad la soo kicin lahayd reer binu Israa'iil si ay u eegaan waxa ay yihiin xaaladaha xabsigooda?
Qiimaha MR: Waanu ka warqabnaa warbixinada aad soo xigatay. Sida aan caalamka uga taageerno saxafiyiinta madaxa banaan iyo ururada saxafada, waxaadna horay u maqasheen in aan ka hadalno in aan laga maarmin warbixintooda, gaar ahaan meelaha ay xiisadaha ka jiraan ama ay dhici karto in ay colaado ka qarxaan. Waxaan aaminsanahay in ixtiraamka xuquuqul insaanka, xorriyaadka aasaasiga ah, iyo bulshada rayidka ah ee xooggan ay muhiim u yihiin maamulka mas'uulka ah iyo jawaab-celinta.
Su'aal: Ugu dambeyntiina, Safiirka Mareykanka u fadhiya Qaramada Midoobay ayaa todobaadkii hore ka hadlay, wuxuuna carrabka ku dhuftay rabshadaha iyo gardarada ka dhanka ah dadka reer Falastiin. Haddana waxaan aragnay oo kaliya inay kordheen rabshadaha maalmihii lasoo dhaafay. Taasi ma wax aad kor u qaadayso ama aad aad ugu mashquulsan tahay arrimaha sida Ukraine iyo Iran iyo waxyaalahan oo dhan - waxaan ula jeedaa, si la fahmi karo?
Qiimaha MR: Waxa uu yidhi, waxaanu nahay dawlad weyn. Waxaan nahay waax weyn. Maaha in la isticmaalo sarbeeb aad loo isticmaalo, laakiin waanu socon karnaa oo xanjo isku mar ruugi karnaa. Marka ay timaado arrinta aad soo bandhigtay, waad maqashay annagoo ka hadlayna arrintan. Waxaad soo xigatay faallooyinka qaarkood dhawaan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa hore uga hadashay arrintan sidoo kale. Waxaan aaminsanahay inay muhiim u tahay dhammaan dhinacyada inay ka fogaadaan tillaabooyinka sii xumeynaya xiisadaha iyo dadaallada aan hoos loo dhigin ee lagu horumarinayo xal laga wada-hadlo oo laba gobol ah. Tan waxaa ka mid ah xad-gudubyada ka dhanka ah dadka rayidka ah iyo rabshadaha degayaasha.
Su'aal: Ned, wax ma ka weydiin karaa Iran (aan la maqli karin)?
Qiimaha MR: Markaa laba su'aalood oo Iran ah. Hubaal.
Su'aal: Haa. Wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa isniintii sheegay inay diyaar u yihiin inay ka fiirsadaan wadahadal toos ah oo ay la yeeshaan Maraykanka haddii ay dareemaan inay heshiis fiican ka heli karaan dammaanad qaadka. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan wax xiriir ah oo arrintan ku saabsan? Oo nimanyahow miyaad ka fikiraysaan inaad wadahadal toos ah la yeelato?
Qiimaha MR: Xumeyra, sida aad ogtahay, waxaan diyaar u nahay inaan si toos ah u kulano. Waxaan si joogta ah u haynay mowqifka ah inay aad uga faa'iidaysan lahayd in si toos ah Iran loola macaamilo labada wada xaajood ee JCPOA iyo arrimo kale. Tani waxay ku fidsan tahay qaabab laba geesood ah iyo sidoo kale qaabab badan. Kulanka tooska ah wuxuu awood u siinayaa isgaarsiin hufan, kaas oo si degdeg ah loogu baahan yahay in si degdeg ah loo gaaro isfaham ku saabsan soo celinta wadajirka ah ee u hoggaansanaanta JCPOA.
Waxaan horay u sheegnay qodobkan, laakiin marka la eego xawaaraha horumarka nukliyeerka Iran, waqtigu aad buu u gaaban yahay ilaa faa'iidooyinka faafinta la'aanta ee JCPOA ay u gudbisay sidii markii hore loo diyaariyey oo lagu hirgeliyay - la diyaariyay 2015 lana hirgeliyay 2016 ayaa ka miisaan badan horumarka nukliyeerka. Iran ayaa samaysay. Markaa waxaanu doonaynaa inaanu diblumaasiyaddan u samayno si degdeg ah, waxaanan si joogto ah u caddaynay in haddii si toos ah loo hawl-galo ay u adeegayso ujeedooyinkaas.
Su'aal: Marka la eego mawqifkaaga hadda iyo waxa ay yiraahdeen, miyaynu filaynaa inay taasi dhowaan dhacdo? Ma jirtaa sabab ay tani u dhici karto dhawaan? Ma jirtay isgaarsiin si dadban oo ku saabsan in tani ay dhaqso u dhacdo?
Qiimaha MR: Waa inaad weydiisaa saraakiisha Tehran. Annaga- tani maaha markii ugu horreysay ee aan qodobkan soo bandhigno. Waxaan qodobkan u samaynay si joogto ah ilaa hadda. Iiraaniyiintu waxay ku adkaysteen qaabka dadban ee Vienna. Waxa aynu in badan xusnay in wada-hadallada dadban, gaar ahaan arrinka cakiran iyo muhimaddan, ay caqabad ku yihiin. Markaa mawqifkayagu wuu caddaa. Waxaan ku tilmaami lahaa maamulka Iran.
Su'aal: Shayga ugu dambeeya ee kan. Waxaan shalay waraysi la yeelanay Ergeyga Gaarka ah ee Malley, kaas oo sheegay in ay adkaan doonto in la qiyaaso in Maraykanku uu heshiis la galay Iran haddii aan la sii deyn la haystayaasha Maraykanka. Kaliya waxaan rabaa inaan xoogaa kugu riixo sababta maamulku uusan diyaar ugu ahayn inuu si toos ah u sheego inaysan dib ugu biiri doonin JCPOA ilaa muwaadiniinta Mareykanka la sii daayo.
Qiimaha MR: Hagaag, waxa Ergeyga Gaarka ah yiri waa, xigasho, "aad bay noogu adag tahay inaan qiyaasno inaan ku laabano heshiiskii Nukliyeerka iyadoo afar Mareykan ah oo aan waxba galabsan ay afduub ahaan u haystaan ​​Iran."
Qiimaha MR: Tani waa qodob uu horay u soo noqnoqday, markaa tani waa - maaha inay noqoto war. Sidoo kale, waxaan kuu sheegi karaa, maaha war Iiraaniyiinta. Mawqifkaas si dadban ayay nooga maqleen hadda ka hor.
Laakiin Ergeyga Gaarka ah wuxuu kaloo sheegay in arrimahan ay ku shaqeynayaan waddooyin gaar ah, waxayna ku shaqeynayaan waddooyin kala duwan sabab aad u fudud dartood: Ku soo noqoshada wadajirka ah ee u hoggaansanaanta JCPOA ayaa ugu fiican soo jeedin aan la hubin. Waxaan rabnaa in aan aragno kuwan Mareykanka ah ee lagu haystay rabitaankooda sannado badan, kana fog qoysaskooda, oo sida ugu dhaqsaha badan ugu soo laabanaya. Uma adeegayo ujeeddooyinkeenna, ma fuli doonto danahooda, inay masiirkooda ku xidhaan soo jeedin aan hore u idhi waa hubaal sida ugu wanaagsan. Markaa waa sababta ay hubaal u midabayso is dhexgalkayada, laakiin kuwani waxay ku shaqeeyaan wadooyin gaar ah.
Su'aal: su'aal ma weydiin karaa?
Su'aal: Laakiin Ned, sida aad u sheegto, way u egtahay - waxay aad ugu egtahay shuruud.
Qiimaha MR: Mar labaad, maahan kiisku inuu jiro xidhiidh toos ah ama si cad sababta oo ah soo noqoshada wadajirka ah ee u hoggaansanaanta JCPOA waa sida ugu fiican ee soo jeedin aan la hubin. Waxaan rabnaa soo celinta dadkan Mareykanka ah inay noqoto soo jeedin gaar ah, sidaas darteed arrimahan waanu kala ilaalinaynaa.
Haa Waan ka xumahay.
Su'aal: Wasiirka arrimaha dibadda Kuwait ayaa Sabtidii booqday Beyruut, wuxuuna u gudbiyay Lubnaan soo jeedinta kalsoonida lagu dhisayo iyo dhambaal ay isku dubarideen dalalka Khaliijka, wuxuuna toddobaadkan booqanayaa Washington. Ma ka warqabtaa soo jeedinta? Oo ma jiraan xidhiidh ka dhexeeya booqashadiisa Beirut iyo Washington?
Qiimaha MR: Hagaag, waxaan filayaa marka uu Xoghayaha la kulmo dhiggiisa Kuwait Arbacada inay fursad u heli doonaan inay ka wada hadlaan Lubnaan. Waa shay Maraykanka, oo ay weheliyaan la-hawlgalayaasheena - oo ay ku jiraan saaxiibadayada Khaliijka, Faransiiska, iyo kuwa kale - aad iyo aad ayaan diiradda u saarnay. Markaa waxay ila tahay inaynu wax badan ka odhan doono shirka labada dhinac ee Arbacada.
Su'aal: (Lama maqli karo) ee saaxiibkayaga Tracy Wilkinson ee Honduras. Kooxaha iska soo horjeeda ee shirweynahooda ayaa laga yaabaa inay carqaladeeyaan caleemo-saarka madaxweynaha cusub ee Khamiista, oo Wasaaradda Arrimaha Dibadda ay si degdeg ah u soo dhaweysay. Madaxweyne ku xigeenka Harris ayaa lagu wadaa inuu u safro caleema saarka. Maraykanku ma samaynayaa wax uu ku qaboojiyo qalalaasahaas?
Qiimaha MR: Hagaag, waxa aan odhan doono waa in doorashada hogaanka ku meel gaadhka ah ee cusub ee Honduras National Congress ay tahay go'aan madaxbanaan oo Honduras ah. Waxaan rajeyneynaa inaan sii qoto dheereyno shaqadayada si wadajir ah maamulka Castro ee soo socda iyo Honduras ee ka kala yimid dhammaan dhinacyada siyaasadda si aan u horumarinno danaha aan wadaagno. Waxaan ugu baaqaynaa jilayaasha siyaasadda inay isdejiyaan, oo ay wadahadlaan, ka waantoobaan colaadda iyo hadalada kicinta ah, waxaanan u soo jeedinaynaa taageerayaashooda inay si nabad ah isu muujiyaan iyagoo ixtiraamaya sharciga.
Sidaad la socotaan, Madaxweyne ku xigeenka Harris waxa uu hore u helay fursad uu kula xidhiidho Madaxweynaha la doortay ee Castro si uu ugu hambalyeeyo guusheeda taariikhiga ah ee ay u noqotay haweenaydii ugu horreysay ee Honduras ah. Wadahadalkaas bishii hore waxay ka wada hadleen danaha ay wadaagaan ee ah inay ka wada shaqeeyaan sidii wax looga qaban lahaa sababaha asalka u ah socdaalka, si kor loogu qaado fursad dhaqaale oo loo dhan yahay dadka Honduras, si loo hagaajiyo - si loola dagaallamo musuqmaasuqa, si loo yareeyo khataraha amniga, iyo in la wanaajiyo helitaanka caafimaadka. iyo waxbarashada.
Su'aal: Mid ku saabsan Turkiga oo ah saaxiibkay VOA.
Qiimaha MR: Hubaal. Ma leedahay a - ma waxaa jirtay dabagal, Conor?
Su'aal: Maya, waa su'aal kale, marka hore u soco, Barbara.
Su'aal: Markaa haddii aanad waxba ka qabin, saaxiibkay VOA-da waxa uu la yaabay bal inay jiraan wax falcelin ah oo ay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ka bixinayso laba kiis oo ku saabsan xannibaadaha xorriyadda hadalka ee Turkiga. Mid waa Sabtidii ina dhaaftay: Suxufi Turki ah oo caan ah ayaa xabsiga loo taxaabay ka dib markii uu aflagaadeeyay Madaxweyne Erdogan. Maanta wakaaladda gobolka - gobolku wuxuu ganaaxay kanaalka TV-ga ee ay u shaqeyso. Arrinta labaad waa fannaanad caan ah oo Islaamiyiinta iyo kooxaha waddaniyiinta ah u hanjabaya wax ay qortay in muddo ah ka hor, Madaxweyne Erdogan ayaa ugu hanjabay in uu aamusin doono salaadda Jimcaha, isagoo yidhi, “Waa waajib ina saaran in aan jarno afafkaas” xigasho la'aan.
Wax falcelin ah ma ka qabtaa kiisaskan?
Qiimaha MR: Hagaag, tani way khusaysaa Turkiga laakiin waa mid caalami ah oo ku dhaqankeeda sidoo kale, waana xaqiiqda ah in aan aaminsanahay in xoriyada hadalka ay xoojiso dimuqraadiyada oo ay u baahan tahay in la ilaaliyo xitaa marka ay khusayso hadalka qaar ayaa laga yaabaa inay dareemaan muran ama qaar ayaa laga yaabaa inay dareemaan raaxo. Waanu ka warhaynaa waanan ka niyad jabnay dareenka iyo xiritaanka Sedef Kabaş, mid ka mid ah kiisaska aad tixraacday, iyo mabaadi'daasi waxay si siman ugu dhaqmaan Turkiga sida ay u sameeyaan waddan kale.
Su'aal: Burkina Faso. Milatarigu waxay u qaadeen TV si ay u caddeeyaan inay xukunka hayaan. Xafiiska madaxweynaha ayaa beeniyey arrintaas, laakiin madaxweynaha lama arag. Ma la socotaa waxa soo baxaya? Inqilaab ma jiraa? Miyaad bilowday qiimayn lagu ogaanayo inuu jiro iyo in kale?
Qiimaha MR: Hagaag, waxaan la soconaa wararka sheegaya in madaxweynaha Burkina Faso ay xireen xubno ka tirsan militariga dalkaas. Kooxdayada safaarada ee Ouagadougou waxay la socdaan xaalada waxayna ilaashadaan xidhiidhka saaxiibada caalamiga ah iyo sidoo kale saraakiisha dawlada Madaxweyne Kabore. Waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah loo sii daayo Madaxweyne Kabore iyo saraakiisha kale ee dowladda, iyo in xubnaha ciidamada ammaanka ay ixtiraamaan dastuurka Burkina Faso iyo hoggaanka rayidka. Waxaan ku boorineynaa dhammaan dhinacyada ku jira xaaladdan dareere ah inay isdejiyaan oo ay raadiyaan wadahadal si loo xalliyo cabashooyinka. Anaga – safaaradeena Ouagadougou waxa aanu kula talinay muwaadiniinta Maraykanka ee Burkina Faso in bandow qasab ah ay dhaqan galiyeen maamulada maxaliga ah iyo muwaadiniinta Maraykanka waxa lagula talinayaa in ay gabaad galaan, ka fogaadaan dadka faraha badan, iyo in ay la socdaan warbaahinta gudaha si ay u helaan warar cusub.
Su'aal: Maraykanku waxa uu gargaar aad u badan siiya Burkina Faso. Ma samaynaysaa qiimayn afgambi?
Qiimaha MR: Markaa tani waa xaalad soo kordhaysa. Waa xaalad weli dareere ah. Waxay sii waday inay horumarto xitaa saacadihii la soo dhaafay, sidaas darteed aad ayey ugu dhakhsaha badan tahay in la tilmaamo, ugu yaraan si rasmi ah annaga, dabeecadda horumarka socda. Waxa aanu ku baaqnay in la xakameeyo dhammaan jileyaasha anagoo si taxadar leh dib u eegis ku samaynayna dhacdooyinka goobta ka dhacay wixii saamayn ah ee ku yeelan kara caawimadayada.
Su'aal: Iran, dabagal degdeg ah. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa hadda sheegtay in – loo aanaynayo saraakiil sarsare oo Maraykan ah iyagoo sheegay inay jeclaan lahaayeen inay wadahadal toos ah la yeeshaan Iran. Ma xaqiijin kartaa taas? Ma rabtaa in aad wadahadal toos ah la yeelato Iran -
Qiimaha MR: Waxaan mooday inaan tan shan daqiiqo ka wada hadalnay Xumeyra.
Su'aal: Waan ka xumahay.
Qiimaha MR: Haa Waxaan sameynaa
Su'aal: Waa inaan tabcay. Hagaag, raali ahaada
Qiimaha MR: Haa Haa
Su'aal: Haddaba maxaa la rajeynayaa in lagu gaaro wadahadal toos ah oo aan ahayn waxa hadda Vienna ka socda?
Qiimaha MR: Hagaag, kaliya waxaan ku yeelanay isweydaarsi dheer oo tan ah, markaa waxaan kuu tixraaci lahaa taas.
Dhowr su'aalood oo u dambeeya. Haa fadlan? Haa?
Su'aal: Ma jiraan wax war ah oo aad ka bixin karto oo ku saabsan jebinta ISIS ee waqooyiga Suuriya, ha ahaato dhanka taageerada isbahaysiga iyo tirada baxsadka ah? Ka dibna waa maxay – maxay ka odhanaysaa awoodda SDF ee ah inay sugaan xarumaha, ma waxaad u aragtaa in tani ay tahay fashil sirdoon oo dhinaca isbahaysiga ah?
Qiimaha MR: Hagaag, sida aad u badan tahay inaad aragtay, waxaanu soo saarnay bayaan todobaadkan dhamaadkiisa, waxaana aanu cambaaraynnay weerarkii ISIS todobaadkii hore ku qaadeen xabsiga Hasakah ee waqooyi bari Suuriya, kaas oo aanu fahansanahay inuu ahaa isku day lagu doonayay in lagu sii daayo dagaalyahanada ISIS ee xidhan. Waxaan ku ammaaneynaa SDF jawaab celintooda degdega ah iyo sida ay uga go'an tahay sii wadida dagaalka ka dhanka ah ISIS, weerarkan maskaxdeena ayaa muujinaya muhiimada iyo baahida loo qabo in si buuxda loo maalgeliyo Isbaheysiga Caalamiga ah si looga guuleysto hindisayaasha ISIS si loo wanaajiyo loona sugo xabsiga bini'aadantinimada ee dagaalyahanada ISIS. oo ay ku jirto xoojinta amniga goobta lagu hayo.
Annaga ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqaysa baahida degdegga ah ee dalalka ay ka yimaadeen si ay u celiyaan, dib u soo nooleeyaan, u soo celiyaan, oo ay u dacweeyaan - halka ay ku habboon tahay - muwaadiniintooda lagu hayo waqooyi bari Suuriya. Waxaa naga go'an inaan sii waarano guuldarada caalamiga ah ee ISIS, anagoo la shaqaynayna, iyo anagoo adeegsanayna isbahaysiga iyo saaxiibadayada maxalliga ah. Laakiin wixii intaas dhaafsiisan, horumarinta taatikada ee dhulka, waxaan u baahanahay inaan kuu gudbiyo DOD.
Su'aal: Habeen hore, Waaxda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in haddii duulaan lagu qaado Ukraine, in Mareykanka uusan awoodi doonin inuu soo saaro muwaadiniintiisa. Waxaan la yaabay haddii aad kaliya sharaxi karto sababta, sababta ay taasi noqon doonto.
Qiimaha MR: Ben, tani waa - tani waxay ahayd taariikh ahaan had iyo jeer kiiska. Kharashkayaga ugu horreeya waa inaan bixinno cusbooneysiinta iyo horumarka iyo inaan hubinno isgaarsiinta bulshada gaarka ah ee muwaadiniinta Mareykanka ee waddan kasta, oo ay ku jirto marka aan sameyneyno wax sida bixitaan la amray ama bixitaan la oggolaaday. Waan ogahay waayo-aragnimadii ugu dambeysay ee Afgaanistaan ​​​​waxaa laga yaabaa inay midabayso dareenka ay dadka qaar ka qabaan arrintan, laakiin Afgaanistaan, sababo aan dhammaanteen si fiican u naqaanno, waxay ahayd mid gaar ah. Waxay ahayd wax aanay dawladda Maraykanku hore u samayn.
Sida aad maqasheen annaga oo ku jirna xaaladda Itoobiya, Ukraine, iyo waddamo kale, mas'uuliyaddayadu waa in aan sii wadno bixinta macluumaadka macluumaadka bulshada muwaadiniinta Mareykanka ah, si aan u siino adeegyada, oo ay ku jiraan deynta dib u celinta haddii ay u baahan yihiin inay ka faa'iidaystaan ​​​​ganacsiga. fursadaha. Fursadahaas ganacsi, dabcan, wali waxay ku jiraan kiiska Ukraine. Taasi waa sababta talobixintii xalay ay ku boorisay Mareykanka inay ka fiirsadaan ka faa'iideysiga fursadahaas ganacsi, safaaraddana waxay diyaar u tahay inay gacan ka geysato dadaalladaas.
Su'aal: Waad ku mahadsan tahay, Ned.
Afghanistan Safiirka Australia Beirut Berlin Shiinaha Estonia Europe Guddiga Yurub Geneva Germany Dowladda Iiraan Israelis Korea Kyiv Lubnaan NATO Kuuriyada waqooyi Paris Russia Gardarada Ruushka Ruushka Saudi Arabia Turkey Ukraine United Arab Emirates Qaramada Midoobay United States Vienna Vladimir Putin War Aqalka Cad Yemen
Guddi cusub oo loo doortay Xubnaha UNWTO ku xidhan
Meheradaha Safarrada ee khadka tooska ah ma la qabsan karaan "Cusub...
Cilmi-baaris cusub oo loogu talagalay Bukaannada Kansarka Midabka